१० महिना बिति सक्दा पनि भकुण्डे–दाहालडाँडाको ६ कि.मि. सडक कालोपत्रे भएन, बीपी राजमार्गमा यात्रुलाई सास्ती – Radio Roshi
१० महिना बिति सक्दा पनि भकुण्डे–दाहालडाँडाको ६ कि.मि. सडक कालोपत्रे भएन, बीपी राजमार्गमा यात्रुलाई सास्ती
in रोशी खबर — by Roshikhabar —	July 1, 2020
तस्बिर: राजन दाहाल
यश कुमार परियार–असार १७,
धुलिखेल–नेपालथोक–सिन्धुली–बर्दिवास सडकअन्तर्गत विभिन्न खण्डमा कालोपत्रे गर्न शुरु गरिएको १० महिना बिति सक्दा पनि काम हुन सकेको छैन । विभिन्न खण्डमा सुरु गरिएको यस आयोजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भित्र धुलिखेल–नेपालथोक सडकको दाहालडाँडा देखि भकुण्डे सम्मको ६ किलोमिटर सडक स्तरउन्नती भईसक्नुपर्नेमा अझै सुरसार छैन । सडकमा अहिले पुरानो कालोपत्रे निकालेर माटोले पुरेर छाडिएको छ । ६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती गर्नका लागि वर्ल्ड वाईड, पुष्पाञ्जली र पी.एस जेवी कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् ।
लकडाउनले गर्दा कामदार नपाएकाले काम गर्न नसकिएको उनीहरुको भनाई । वर्ल्ड वाईड कम्पनीका प्रोपाईटर रामशरण भण्डारीले सबै मेसिन स्ट्यानबाई राखिएको तर कामदार नभए कै कारण काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘कामदारहरु नेपालको बारा, पर्सा देखि भारत सम्मका छन्, कोरोनाको जोखिम हुन सक्ने भएकाले कामदार ल्याउन सकेका छैना’– भण्डारीले भने ।
लकडाउन अघि नै काम सुरु गरिएको भएता पनि लकडाउनको कारण देखाउँदै अहिले काम ठप्प छ । अलपत्र अवस्थामा छाडिएको सडकमा अहिले घाम लाग्दा धुलाम्य हुने, पानी पर्दा हिलाम्य हुने गर्छ । सडक स्तरोन्नती गर्न सम्झौता भएको १० महिना पुगिसक्दा पनि काम हुन नसकेपछि स्थानिय आक्रोसित भएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा झण्डै ४२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको योजना रहेकामा अहिलेसम्म पाँच किमी मात्रै सकिएको र बाँकी सडक स्तरोन्नति हुन बाँकि रहेको धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवास सडक आयोजना प्रमुख सुर्य भाटले बताए ।
काठमाडौँलाई पूर्वी तराईसँग जोड्ने मार्गका रूपमा रहेको सो सडक जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको हो । सन् १९९६ मा निर्माण शुरु गरेर सडक सन् २०११ मा सम्पन्न भएको प्रमुख सुर्य भाटले जानकारी दिए । नौ पुल रहेका उक्त सडक खण्डमा सवारी साधनको गति २० देखि ४० किमी रहेको छ ।